Ukukhusela Izilwanyana EChelmsford, E-Essex
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga (SaseMalawi) IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalay IsiMalayalam IsiMyanmar IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiValencian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba isiZapotec (saseIsthmus)
AmaNgqina KaYehova eBritani aye aqalisa ukwakha iofisi yesebe entsha kufutshane neChelmsford, e-Essex. Le ndawo intle ihlala izilwanyana ezahlukahlukeneyo ezikhuselwayo ngumthetho weWildlife and Countryside waseUnited Kingdom ka-1981. AmaNgqina KaYehova enza ntoni ukuze angawophuli lo mthetho nokuze akhusele izilwanyana?
Kwakhiwa ibhulorho yeempuku zasehlathini
AmaNgqina asebenzisa amaplanga asele esetyenzisiwe, ukuze akhe iindlwana ezincinane ukuze afake iimpuku zasehlathini zingabikho kwindawo ekusetyenzwa kuyo. Aye enza aza akha ibhulorho yeempuku ukuze aqinisekise ukuba ziyakwazi ukuya endaweni yazo enemithi. AmaNgqina aye aphinda alandela indlela ethile yokugcina imithi ukuze iimpuku zikwazi ukuhlala kuyo. Ngexesha lokufukama kwezilwanyana eminye imithi iye isikwe. Le ndlela enza ngayo iqinisekisa ukuba iimpuku aziphazamiseki, ikhusela indawo ezihlala kuyo kwaye nokutya kwazo kuhlala kukhona.
Kufakwa iindlwana zeempuku zasehlathini
AmaNgqina aye akhusela amarhamba kunye namacilikishe abizwa ngokuba ziiblindworms. Abalondolozi bendalo baye baqokelela ezi zilwanyana zirhubuluzayo ebezikwizindlu zokwexeshana phantsi kophahla baza bazifaka kwindawo ekhuselekileyo ekude nalapho kwakhiwa khona. Le ndawo intsha zifakwe kuyo inendawo yokufukamela kunye nocingo oluzikhuselayo. AmaNgqina ayalugada olu cingo ukuze aqinisekise ukuba ezi zilwanyana azibuyeli kule ndawo kwakhiwa kuyo zize zenzakale.
Le ndawo isebenzisa izibane ezingakhanyi kakhulu ukuze zingaphazamisi amalulwane ebusuku. Ezi zibane zikhanyisa kuphela xa kukho imoto edlulayo ukuze amalulwane akwazi ukubhabha kumnyama. Eminye imithi ekule ndawo iza kugcinwa kuze kongezwe neminye, ngenxa yokuba amalulwane azingela kuyo. Eminye imithi kuye kwanyanzeleka ukuba isuswe, ngoko abasebénzi baye benza iibhokisi zamalulwane.
Kufakwa iibhokisi zamalulwane
AmaNgqina agcina imithi eliqela ekudala ikho ngokusebenzela kude kwiingcambu zayo. Izinambuzane ezininzi, amalulwane kunye neentaka zihlala kule mithi. Ngokwenza zonke ezi zinto, amaNgqina azimisele ukuqhubeka ekhusela izilwanyana zaseChelmsford.